Bakalorea “2ème session” Mpampianatra vaovao no manomana ny laza adina
Raharaha bakalorea 43 nosamborina, 6 nidoboka am-ponja,…
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny famongorana ireo fanetriben’ny firenena tamin’ny famoahana ireo laza adina Bakalôrea mialoha ny fotoana,
Minisiteran’ny fanabeazana sy ny Vivo Energy Hiara-hiasa amina tetika 3 lehibe
Nanatanteraka fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa tamina mpiara-miombon’antoka maromaro, tetsy amin’ny trano boribory Anosy omaly alakamisy 10 oktobra 2019, ny Menetp “Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel”
Bakalorea, fiainan’ny Oniversite Andrasana ny ampamoakan’ny Seces anio
Miandry ny fivoriambe izay atao anio vao afaka mamoaka fanambarana momban’ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena mikasika ny hanatontosana fihodinana faharoa amin’ny Bakalorea ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na Seces eto Antananarivo,
Mpianatr’Ankatso sy ny mpampianatra Tsy nifampiantso hitokona izany
Manoloana ny feo mandeha fa hampiantso mpianatra hiaraka hanao fitokonana aminy anio ny Seces dia nanao fanambarana
Fanadinana bakalorea Hivaly amin’ny 19 oktobra ho avy izao
Hivoaka ny sabotsy 19 oktobra ho avy izao ny valin’ny fanadinana bakalôrea ankapobeny izay notanterahina nanomboka ny 30 septambra lasa teo.
Andry Rajoelina Hasiana “2ème session” ny bakalorea
Hisy ny bakalorea fihodinana faharoa na “2ème session” ho an’izay tsy afaka, raha ny nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ilay fandaharana manokana nataony omaly, izay nisy fahatarana fa tsy arakaraka ny fotoana nomena ny vahoaka.
Mpampianatra-mpikaroka Tsy mivoaka any ivelany raha tsy hankatoavin`ny filoham-pirenena
Nandritra ny “COPRES Elargi” ny 3 septambra farany teo dia nisy fampahafantarana (note de service) maromaro navoakan`ny fitondram-panjakana. Manitsaka tanteraka ireo lafiny efatra eo amin`ny fahaleovantenan`ny oniversite izany, hoy ny SECES Mahajanga.
Mpampianatra vaovao hafa no nantsoina hamolavola ny laza adina amin’ny “2ème session exceptionnelle” izay hatao ny 23-26 oktobra izao, ka nanomboka omaly ny fiantsoana sy famondronana azy ireo hanomana izany.
Tsy maintsy alefa mitoka-monina na manao “conlave” indray izy ireo. Miroso ny minisitera amin’ny fitsarana ny bakalorea, hoy ny minisitry ny fampianarana ambony Blanche Nirina Richard. Hohamafisina ny fitsarana faran’izay haingana ny fitsarana, ka nampitomboina vao roa heny ny mpampianatra sy mpandraharaha miantsoroka an’izany. Nanangana ny “cellule de crise” ihany koa ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, hanaraha-maso akaiky ny fizotry ny fitsarana ny fanadinana bakalorea, izay havoaka ny 19 oktobra izao, izany hoe afaka 11 andro. Hisy solontena 3 avy amin’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, solontena 2 avy amin’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena, fampianarana ara-teknika, sy fiofanana arak’asa, miampy solontena 2 avy amin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena misahana ny zandarmaria, ary solontena 1 avy amin’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka io rafitra natsangana io. Tsy tafiditra ao anatin’io izany ny avy amin’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka (SECES), izay nivoy ny hanafoanana ny bakalorea natao teo sy hamerenana izany.